Manjooyin shiilan | January 2020
Ugu Weyn Ee Manjooyin shiilan
Tilmaamaha gogol-gabboodka guga
Si looga fogaado niyad-jabka iyo niyad-jabka, daryeel xanuunka noocan oo kale ah sida boorishku waa inuu ahaadaa mid sax ah-sax ah, adigoon dayicin waxyaaba yar. Sidaa darteed, waxaan si faahfaahsan u tixgelineynaa howlgal aad u muhiim ah - manjooyin fersheed, oo la sameeyey guga. Miro caleen ah ayaa isku xidhay si loo sameeyo taaj dabiici ah oo udhow geedka, t.
Manjooyin faanbood waa xannibaad iyo nidaam khasab ah.
Ma waxaad doonaysaa in aad koro geed jilicsan oo qurux badan beertaada oo aad soo ururiso miraha dhadhan fiican sannad kasta? Si taxaddar leh u akhri oo u fiirso waxa aan kuu sheegi doono. Ujeedada ugu muhiimsan ee ah noocyada kala duwan ee miro, iyo sidoo kale geed kasta oo midho kale, waa in la hubiyo koritaanka habboon ee laamiyada miraha-dhalmada, iyo sidoo kale koritaanka miraha waaweyn iyo casiir leh, si siman u qaybiyey qaab dhismeedka taajkii geedka.
Sida loo dhigo geedaha shimbiraha
Ilaa dhowaan, fersken ayaa loo tixgeliyey wax qallafsan, qaar yar ayaa awoodi kara inay ku cunaan miro yar. Thanks to shaqada ee breeders, waxaa suurtagal ah in la abuuro noocyo cirif ah kuwaas oo ku dhali kartaa miro xitaa xaaladaha ugu habboon ee dalagga this. Iyadoo korodhka shimbirta saxda ah, waxaad heli kartaa ma aha oo kaliya geed aad u qurux badan, laakiin sidoo kale tiro badan oo ah miraha tayo sare leh.
Aashifku waa geedka jilicsan oo ka cabsanaya baraf, cayayaanka kala duwan iyo, dabcan, cudur. Mid ka mid ah kuwa ugu caansan iyo khatarta waxaa loo yaqaan 'caleen caleen'. Maxay tahay, iyo sida loola macaamilo, u sheeg xigga. Ma taqaanaa? Laga soo bilaabo meesha ay caleen ka baxsan adduunka oo dhan, looma ogaan karo. Cilmi-baadhayaashu waxay go'aaminayeen in caan duurjoogta Prunus davidiana Franch, oo laga helo meel u dhow Beijing (Shiinaha), ayaa ugu dhow.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Manjooyin shiilan 2020